မာကြူရီဒွပျပေါငျး လှနျကဲစှာပါဝငျတဲ့ အလှကုနျပစ်စညျးတှကေို ကနျြးမာရေးအရ သုံးစှဲရနျမသငျ့ – Voice of Myanmar
မာကြူရီဒွပျပေါငျး လှနျကဲစှာပါဝငျတဲ့ အလှကုနျပစ်စညျးတှကေို ကနျြးမာရေးအရ သုံးစှဲရနျမသငျ့
မုံရှာ ၊ သွဂုတျ ၂၄ – ၂၀၂၀
အလှကုနျပစ်စညျးတှဟော လူတှရေဲ့ တကိုယျရသေနျ့ရှငျးရေးကို အထောကျအကူပွုပေးနိုငျသလို မာကြူရီဒွပျပေါငျးတှေ အလှနျအကြှံပါဝငျနတေဲ့အတှကျ အဲ့ဒီအလှကုနျပစ်စညျးတှကေို သုံးစှဲမိတယျဆိုရငျ ကနျြးမာရေးကို ဆိုးရှားစှာထိခိုကျနိုငျတယျလို့ မွနျမာနိုငျငံဆေးဝါးသုတသေန ဓာတုအဆိပျသုတသေနဌာနခှဲရဲ့ ဒွပျခှဲအဖွတှေအေရ သိရပါတယျ။
“ ကမ်ဘာ့အသိအမှတျပွု အမရေိကနျပွညျထောငျစု အစားအသောကျနှငျ့ ဆေးဝါးကှပျကဲရေးအဖှဲ့က သတျမှတျပွဌာနျးထားတဲ့ မာကြူရီဒွပျပေါငျး ပါဝငျမှုနှုနျးထားပမာဏဟာ (1 ppm) ဖွဈတယျ ၊ ဈေးကှကျတငျ ရောငျးခနြတေဲ့ အလှကုနျပစ်စညျးတခြို့ကို ဝယျယူပွီး ကုတျနံပါတျ အမှတျအသားတပျလို့ ပစ်စညျးတမြိုးခငျြးစီကို သတ်ထုဒွပျစငျတှေ တိုငျးတာတဲ့ ( Atomic Absorption Spectrophtometer )ကိရိယာနဲ့ တိုငျးတာစဈဆေးကွညျ့တယျ ၊ အဖွကေတော့ အလှကုနျပစ်စညျးထဲမှာ မာကြူရီဒွပျပေါငျး ပါဝငျရမယျ့ သတျမှတျနှုနျးထားပမာဏအထကျ သာလှနျပွီး ပါဝငျနတေဲ့ အလှကုနျပစ်စညျး တခြို့တှရေတယျ ၊ ပါဝငျနတေဲ့ မာကြူရီဒွပျပေါငျး ပမာဏအခြိုးကတော့ (12 .9ppm) ကနေ (2314.9 ppm ) အထိ ဖွဈနတောကို တှရေ့တယျ ၊ အဲ့ဒီအခြိုးဟာ အရမျးကွောကျစရာကောာငျးတဲ့ အခြိုးပမာဏဖွဈတယျ ၊ အလှကုနျပစ်စညျးလို့ပဲ ပွောလို့ရပါ့မယျ ၊ အမြိုးအစားနဲ့ ကုနျပစ်စညျးနာမညျကို လုပျငနျးကငျြ့ဝတျအရ ထုတျဖျောပွောလို့ မဖွဈဘူး ” လို့ ကနျြးမာရေးထောကျကူပွု သုတသေီအဖှဲ့ဝငျ ဒေါကျတာ သီဟဇျောက ပွောပါတယျ။
အလှကုနျပစ်စညျးတှေ ထုတျလုပျတဲ့အခါ မာကြူရီဒွပျပေါငျး ( Mercury compounds ) တှကေို မဖွဈမနေ အခွခေံပွီးထုတျလုပျရတာဖွဈတဲ့အတှကျ မာကြူရီဒွပျပေါငျး ပါဝငျရမယျ့ ပမာဏအခြိုးအစားကို သကျဆိုငျရာက သတျမှတျပေးထားပွီး အလှနျအကြှံသုံးစှဲတာတှေ မလုပျဖို့ကိုလညျး တားမွဈကနျ့သတျထားပါတယျ ၊ မာကြူရီ ဒွပျပေါငျးတှေ လှနျကဲစှာ ပါဝငျနတေဲ့ အလှကုနျပစ်စညျးတှကေို ရရှေညျသုံးစှဲမိတယျဆိုခဲ့ရငျ ဦးဏှောကျနဲ့ အာရုံကွော ၊ အစာအိမျနဲ့ အူလမျးကွောငျး ၊ ဆီးလမျးကွောငျးနဲ့ ကြောကျကပျ ၊ အရပွေားနဲ့ အစာအဆိပျသငျ့ စတဲ့ နောကျဆကျတှဲရောဂါတှေ ဖွဈလာနိုငျတယျလို့ ကနျြးမာရေးထောကျကူပွုအဖှဲ့ရဲ့ အစီရငျခံစာမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အလှကုနျပစ်စညျးတှကေို လုပျငနျးသဘောအရ ရရှေညျသုံးစှဲနရေတဲ့ ဗြူတီးစလှနျတှအေနနေဲ့ မာကြူရီဒွပျပေါငျးအကွောငျးကို ကိုယျတိုငျနားလညျထားဖို့လိုအပျပွီး နားလညျတတျကြှမျးတဲ့ ပညာရှငျတှနေဲ့ ဆှေးနှေးတိုငျပငျပွီးမှသာ အလှကုနျပစ်စညျးတှကေို ဝယျယူသုံးစှဲတာမြိုး လုပျသငျ့တယျလို့ အရပွေားအထူးကု ဆရာဝနျကွီးတဈဦးကလညျး (VOM )သတငျးဌာနကို အကွံပွုပွောဆိုထားတာဖွဈပါတယျ။
မာကျူရီဒြပ်ပေါင်း လွန်ကဲစွာပါဝင်တဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို ကျန်းမာရေးအရ သုံးစွဲရန်မသင့်
မုံရွာ ၊ သြဂုတ် ၂၄ – ၂၀၂၀
အလှကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ လူတွေရဲ့ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို အထောက်အကူပြုပေးနိုင်သလို မာကျူရီဒြပ်ပေါင်းတွေ အလွန်အကျွံပါဝင်နေတဲ့အတွက် အဲ့ဒီအလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို သုံးစွဲမိတယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးသုတေသန ဓာတုအဆိပ်သုတေသနဌာနခွဲရဲ့ ဒြပ်ခွဲအဖြေတွေအရ သိရပါတယ်။
“ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားတဲ့ မာကျူရီဒြပ်ပေါင်း ပါဝင်မှုနှုန်းထားပမာဏဟာ (1 ppm) ဖြစ်တယ် ၊ ဈေးကွက်တင် ရောင်းချနေတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတချို့ကို ဝယ်ယူပြီး ကုတ်နံပါတ် အမှတ်အသားတပ်လို့ ပစ္စည်းတမျိုးချင်းစီကို သတ္ထုဒြပ်စင်တွေ တိုင်းတာတဲ့ ( Atomic Absorption Spectrophtometer )ကိရိယာနဲ့ တိုင်းတာစစ်ဆေးကြည့်တယ် ၊ အဖြေကတော့ အလှကုန်ပစ္စည်းထဲမှာ မာကျူရီဒြပ်ပေါင်း ပါဝင်ရမယ့် သတ်မှတ်နှုန်းထားပမာဏအထက် သာလွန်ပြီး ပါဝင်နေတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း တချို့တွေရတယ် ၊ ပါဝင်နေတဲ့ မာကျူရီဒြပ်ပေါင်း ပမာဏအချိုးကတော့ (12 .9ppm) ကနေ (2314.9 ppm ) အထိ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ် ၊ အဲ့ဒီအချိုးဟာ အရမ်းကြောက်စရာကောာင်းတဲ့ အချိုးပမာဏဖြစ်တယ် ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းလို့ပဲ ပြောလို့ရပါ့မယ် ၊ အမျိုးအစားနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းနာမည်ကို လုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်အရ ထုတ်ဖော်ပြောလို့ မဖြစ်ဘူး ” လို့ ကျန်းမာရေးထောက်ကူပြု သုတေသီအဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာ သီဟဇော်က ပြောပါတယ်။
အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့အခါ မာကျူရီဒြပ်ပေါင်း ( Mercury compounds ) တွေကို မဖြစ်မနေ အခြေခံပြီးထုတ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် မာကျူရီဒြပ်ပေါင်း ပါဝင်ရမယ့် ပမာဏအချိုးအစားကို သက်ဆိုင်ရာက သတ်မှတ်ပေးထားပြီး အလွန်အကျွံသုံးစွဲတာတွေ မလုပ်ဖို့ကိုလည်း တားမြစ်ကန့်သတ်ထားပါတယ် ၊ မာကျူရီ ဒြပ်ပေါင်းတွေ လွန်ကဲစွာ ပါဝင်နေတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို ရေရှည်သုံးစွဲမိတယ်ဆိုခဲ့ရင် ဦးဏှောက်နဲ့ အာရုံကြော ၊ အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်း ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းနဲ့ ကျောက်ကပ် ၊ အရေပြားနဲ့ အစာအဆိပ်သင့် စတဲ့ နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးထောက်ကူပြုအဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို လုပ်ငန်းသဘောအရ ရေရှည်သုံးစွဲနေရတဲ့ ဗျူတီးစလွန်တွေအနေနဲ့ မာကျူရီဒြပ်ပေါင်းအကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်နားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပြီး နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးမှသာ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူသုံးစွဲတာမျိုး လုပ်သင့်တယ်လို့ အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးကလည်း (VOM )သတင်းဌာနကို အကြံပြုပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။